မော်တော်ကားနဲ့ ကိုယ် (၂) | မိုးချိုသင်း မှတ်တမ်း
ဟား..ဟား ငါ့နှမတော့ ဖြစ်တတ်ပလေ..အကိုကြီးလဲ တခါတလေ အဲဒီကားပေါ်မောင်းတက်ကြည့်ဖို့ စိတ်ကူးပေါ်မိသား..ညည်းကတော့ လက်တွေ့ကိုအကောင်အထည်ဖေါ်ပလိုက်တာပဲ..
ဟိဟိ အန်ဖတ်တန်ခိုးတော်တော်ကြီးတာပဲ .. အော့အော့ .. အမှန်ခြစ်ကြီးကြီး တစ်မှတ်က အမှတ်ဘယ်လောက်လည်း မမချို တစ်မှတ်ကို ၁၀၀ ထင်ရဲ့။
ကျွန်မတော့ အခုထိ ကားမမှောင်းဘူး။ ယောက်ျားကနဲ့ ကလေးက ကားမှောင်းသင်ဖို့ ပြောရင် မြန်မာပြည် ပြန်ရောက်မှပဲ သင်တော့မယ် ဒီမှာတော့ Public Transport ဒီလောက်ကောင်းတဲ့ နေရာ ဒေသမှာ အန္တရယ်လည်းများ၊ လေထုလည်း ညစ်ညမ်းခံပြီး ကားမှောင်းစရာ လိုသေးလားလို့ပဲ ပြန်ပြောတယ်။ အမှန်က အဲဒါကြောင့် မဟုတ်ဘူး ကြောက်လို့ပါ။ ပြီးတော့ ကျွန်မတက်တဲ့ ကျောင်းက မြို့လယ်တည့်တည့်မှာ မီးရထားအစုံ ဘတ်စကားအစုံရဲ့ ဆုံရာမှာလည်း ဖြစ်တယ်၊ ကားရပ်ဖို့ကျတော့ အကန့်အသတ် ရှိပြီး ရရင်လည်း ကားရပ်ခ ပိုက်ဆံက သိပ်ဈေးကြီးတော့ ရထားနဲ့ သွားလာကြတာပဲ များပါတယ်။
သွေးတုံး ကြီး အန်တယ် ပြောပြီး တစ်ရှုးဖြစ်နေတဲ့ နေရာမှာ....အသံထွက်အောင် ရီမိပြီး...အမှန်ခြစ်ကြီးကြီး နေရာမှာ ကြည်ကြည်နူးနူး လေးခံစားရပါတယ်...မမ။
ကျွန်တော်ကားမောင်းတက်ခါစကလဲ အရမ်းရယ်ရတယ် ဗျ. ကားကိုရေဆေးခုံသွားတင်တယ်. ခုံက အမြင့်ကို တက်ရမှာ .. ရေဆေးခုံတည့်တည့်မှာ ကားကိုရပ်. ဂီယာကြီးထိုး လီဗာကိုနင်း..ဒူးတွေလဲတုန်. အကုန်တုန်.. ဟိုဘက်လွန်ကျမှာလဲ ကြောက်နေတာ. အဲ.ရောက်သွားတယ်ဗျာ ချောချောချူချူပဲ.. ပြန်ဆင်းမယ်လုပ်တော့ ကွိပါလေရော.. ကိုယ်က ရှေ့ကိုတောင်အခုမှ မောင်းတက်တာလာ နောက်ကိုဆိုတာ မြေပြန့်မှာတောင် ဖြောင့်အောင်ဆုတ်တက်တာမဟုတ် .. တော်တော်အကြံအိုက်သွားတယ်. နောက် ဆိုင်က ဆုတ်ပေးလို့ ပြန်ရောက်ခဲ့ပါတယ်.
ရယ်လိုက်ရတာမမရယ်.. ကြုံလဲကြုံတတ် ရေးလဲရေးတတ်ပ
ရီလိုက်ရတာ မမရယ် တကယ် ရေးလည်းရေးတတ်တယ်
နောက်ထပ်အမှန်ခြစ်ကြီးကြီးပေးရတဲ့အကြောင်းတွေ ရေးပါဦးလား မမရေ။
အမကတော့ဖြစ်ရမယ်။ အမကျမှအဲလိုတွေ ဖြစ်တာလား။ အမအရေးအသားလေးကပဲ ဆွဲဆောင်မှုရှိတာလား။ ဖတ်လို့ကောင်းတာပဲ။ နှစ်မျိုးလုံးထင်ပါရဲ့။ :D အမှန်ခြစ်အကြီးကြီး ပေးသင့်ပါတယ်။ ဒါမျိုးကတော့။ တကယ်တမ်းအခက်အခဲ ဖြစ်လာမှပဲ ကိုယ့်အပေါ်ဘယ်လို စေတနာထားလဲသိနိုင်မှာနော်။ (တိတ်တိတ်လေးအားကျပြီး ပြန်သွားပါတယ်။ :P)
ကျော်ဝဏ္ဏ ကသူ့ဟာသူ ကြောက်လို့လှမ်း
( နောက်တာနော် )
မမရေ့့ 
မမပို့စ်ကိုဖတ်ရင်း မော်တော်ကားလိုက်မောင်းရတာ ခြေထောက်တွေလည်း ဘရိတ်တွေနင်းလို့ပေါ့ (တကယ်တော့ စားပွဲအောက်က တန်းကို ဘရိတ်အမှတ်နဲ့ နင်းနေတာလေ)
အန်ဖတ်တန်ခိုးနဲ့ အမှန်ခြစ်အကြီးကြီးကို ကြိုက်လိုက်တာ :D
မမရေ ကားတော့ မမောင်းတတ်ဘူး၊ အိပ်မက်ထဲ မောင်းနေရင်တောင် ကားကနေ လေယာဉ်ပျံဖြစ်သွားလို့ လေထဲမှာချည်း မောင်းနေတာ အသည်းတွေ တုန်လွန်းလို့
တိုက်ကား မောင်းတာကိုး မမိုးချိုသင်းက
ကြားထဲက ကိုကျော်ဝဏ္ဏ ကြော်ငြာထိုးသွားတယ်ကွာ။
ဆိုင်မှာ expire ဖြစ်နေတဲ့ ဘက်ထီတွေ ပို့ဖို့ မကြိုးစားနဲ့နော်။ သိနေတယ် :P
အဟမ်း... ရူပဗေဒမှာ သင်ရတဲ့ Inertia သဘောအရဆိုရင် နောက်ကားက ကိုယ့်ကားကို ဝင်တိုက်တဲ့အခါ ကိုယ့်က ရှေ့က ဒက်ရ်ှဘုတ်ကို ဝင်ဆောင့်ဖို့ အခွင့်အလမ်းနည်းပါတယ်။ နောက်က ခေါင်းမှီကို နောက်စေ့နဲ့ ဆောင့်မိဖို့ ပိုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ရှေ့က ကားကို ကိုယ့်ကားက ဝင်တိုက်တာဆိုရင်တော့ ဒက်ရ်ှဘုတ်နဲ့သာမက ရှေ့ကမှန်ကိုပါ နဖူးနဲ့ ဆောင့်မိနိုင်ပါတယ်။
(ဦးရှံစားလုပ်ပြီး ကောက်ချက်ဆွဲကြည့်တာပါ။ မှားတဲ့အခါလည်း မှားပေမပေါ့ ဆိုတဲ့ ဦးရှံစားလေ။း-)
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ရုတ်ချည်းတခဏအချိန်လေးမှာ ကိုကျော်ဝဏ္ဏက မချိုသင်းကို စိတ်ပူလို့ ဖက်လိုက်တာပဲ။ အဲဒါက အနှစ်။
အမှန်ခြစ်အကြီးကြီးက ဘယ်နားကို ချစ်ပေးလိုက်တာလဲ။ အဲ .. ခြစ်ပေးလိုက်တာလဲ ..
ဟားဟား မလိမ့်တပတ်နဲ့ သူ့ချစ်ချစ်ကြီး သူ့ကို ဘယ်လောက်ချစ်ကြောင်းပါ ကြွားထားတယ်။
သတိရနေတုံး ချိုသင်းပိုစ့် အသစ်ဖတ်ရလို့ ပျော်သွားတယ်... တချိန်လုံး ပြုံးနေရအောင် ရေးတတ်ပ...း))
ကားကတော့ မောင်းတတ်တာ မမှားပါဘူး... သိပ်မကြောက်နဲ့ ချိုသင်း.. ရဲရဲသာချ...
ကြောက်နေရင် အမှားဖြစ်ဖို့ ပိုများတတ်တယ်...
(ကိုယ်က ကြောက်လို့ အားရသွားပြီလေ... ခုတော့ အေးဆေးပဲ.. ဟဲဟဲ)
အော် အမှန်ခြစ် အမှန်ချစ်း))
ကိုကိုက ချို့ကိုအားကိုးတာပါ။ အမှန်က……..
အမှတ်တစ်ကုဋေလောက်ပေးမိတယ်။ ကံကောင်းလိုက်တာ အစ်မရယ်။
ချိုသင်းရေ..ရယ်စရာ..ကြည်နူးစရာ..ထိတ်လန့်စရာများနဲ့ ရသ စုံပါပေ့နော်.. အနောက်ကနေ ကားတိုက်ခံရတုန်းက ကလေး သုံးယောက်အမေ ကားမောင်းတာဆိုတော့..အဟဲ..ဒီကလေးသုံးယောက်နဲပ ကားမောင်းဖို့ ပိုသွေးကြောင်သွားရတယ်..
ချိုသင်း ကံကောင်းလိုက်တာ... အမှန်ခြစ်ကြီးကြီးအကြောင်းတွေ အများကြီး ရှိဦးမှာပါနော်..များများရေးပါဦး.. အားကျချင်လွန်းလို့...:))
ချိုသင်းတို့ကတော့ကွာ ထမိန်တွေ ကြွားလို့ပြီးတော့ ကားထုတ်ကြွားတယ်။
လုံချည်တွေအကြောင်း ပြောသလိုလိုနဲ့ သူက ကျောက်ခဲကွင်းပါ ဆိုတာပါလာသေး၊ ခုလည်း ကားအကြောင်းကနေ ဂျစ်ဂျစ် က ဘယ်လို ခြစ်ကြောင်းကပါလာတယ် တအားကြွားတာပဲ။:)))))
အမှန်က ဂျစ်ဂျစ်က ချိုသင်းကို ဒိုင်းသဖွယ် အားကိုးတကြီး ဆွဲယူတာပါ။:))
အမချိုသင်းလို့ ရင်းရင်းနှီးနှီးပဲ ခေါ်လိုက်မယ်နော်... စိတ်ထဲမှာက ရင်းနှီးနေတာကြာပါပြီ...။ အမဘလော့ကို အမြဲလည်း ဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်တော့ အသစ်ဖတ်ရမလဲပဲ မျှော်နေတာလေ။ ဒီနေ့တော့ အသစ်တွေ့တော့ ၀မ်းသာသွားတယ်။ သဒ္ဓါ့ဘလော့မှာတော့ အမကို လင့်ချိတ်ထားပါတယ်။
"အဖေ့တုန်းက အသက်မမီတာလေးကို တွေးမိလို့ပါ။"
အမအဲဒါကိုရေးတော့မယ်ဆိုတာ အပေါ်ကစာကြောင်းကို ဖတ်ကတည်းက သိနေတယ်.. ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်း အဲဒီအဖြစ်လေးကို ဘယ်တော့မှ မေ့လို့မရလို့...အမအဖေအကြောင်းရေးတဲ့ အဲဒီပို့စ်လေးကို ဖတ်ပြီးကတည်းက မိဘချင်းကိုယ်ချင်းစာမိတယ်ပဲ ပြောပါတော့.. အမဘလော့ဂ်ကို လာဖတ်တဲ့ အချိန်တိုင်းလိုလို အဲဒါကိုသတိရတာပဲ.. ဖေဖေကလည်း အခုအဝေးမှာရောက်နေတာလဲ ပါမယ်ထင်ပါရဲ့လေ...း)
အမချိုသင်းရဲ့ စာကိုဖတ်၊ကွန်မန့်တွေကိုဖတ် ပြီးတော့အားပါးတရရယ် ... တယောက်တည်းအဆင်ကိုပြေလို့ ။
အမစာတွေဖတ်တဲ့အခါတိုင်း ပျော်ရလို့ ကျေးဇူးပါအမရေ... ။
မချိုသင်း ဘာရေးရေး ဖတ်လို့ကောင်းနေတာချည်းပဲ ... ဟိုအရင် ကားမောင်းသင်တဲ့အကြောင်းရေးတုံးကလဲ ဖတ်ရင်းရယ်ရတာ။
ခုလဲအစမှအဆုံး ပြုံးပြုံးကြီး ဖတ်သွားပါတယ်။
ကျနော် နှလုံးရောဂါဖြစ်ချင်လို့ ....
ကားပေါ်တက်သွားတော့ Mr.Bean ထဲကလို ကားက မွှေ့ရာတင်လာတဲ့ ကားဖြစ်နေသေးလားဟင် :D ပြောစရာနေရာ မတွေ့လို့ ဒီမှာပဲပြောသွားတော့မယ်ခင်ဗျ GMail Page အောက်ဆုံးမှာ Turn off buzz ဆိုတာ စာလုံးအသေးအလေးတွေနဲ့ ရှိပါတယ် အဲဒါကို နှိပ်လိုက်ရင် GMail ထဲမှာ Buzz ကိုမမြင်ရတော့ပါဘူး။
အော..ကိုကျော်ဝဏ္ဏလဲ လက်စသပ်တော့ အမှန်ခြစ်ရာတွေ များနေတာကိုး..
မြင်းရိုင်းနဲ. တူတဲ့ကား မြင်းယဉ်အောင် လုပ်နိုင်ပြီပေါ.
မြေပုံတောင်မကြည်. တတ်ဘူးဆိုလောက်တဲ့ အဆင်.တော. မရောက်ဘူး ထင်ရဲ.
“တကယ့်အရေးအကြောင်းမှာ ကိုယ်ကလဲ ခါးပတ် ပတ်ထားပါလျက်နဲ့ စိတ်ပူဖော် ရလို့ ကိုယ်က ပြန်တွေးတိုင်း ကြည်နူးနေမိတာ..။ အမှန်ခြစ် အကြီးကြီး တမှတ် ဆိုပါတော့..။”
အမျိုးသမီးတွေရဲ့ အမှတ်ပေးစည်းမျဉ်းကို လေ့လာသွားပါတယ် ။
ဆက်တွေးမိတာက အစ်မ ခါးပတ်ပတ်ရင် ခါးပတ်ကြိုး အရှည်ကြီး ဆွဲထုတ်ရမှာပဲ.:)
ကား နောက်ကြည့်မှန် ကနေ အရှိန်နဲ့လာနေတဲ့ ကားကိုလဲ မြင်ရော ကိုယ့်အမျိုးသားက စတီယာရင်ကို လက်လွှတ်ပြီး ကိုယ့်ကို လှမ်းဖက် ထိန်းလိုက်တာပါ။ နောက်ကနေ အရှိန် နဲ့ တိုက်တော့မယ် လို့ သူက မြင်ရတယ်လေ။ ကိုယ် ရှေ့က dashboard နဲ့ ဆောင့်မိမှာ စိုးလို့လေ..။
You gotakind the way you want.
ရဲရဲသာမောင်း အမ .. ဒါမှ ကိုယ်သွားချင်တဲ့ ဈေးကို ဒိုင်လျှိသွားပြီး ကိုယ်ဝယ်လို့ ရမှာ :D
ညီမလဲ မဂျူနိုတို့ မခင်မေဦးတို့ ကို ထောက်ခံတယ်။ ဘယ်လိုပဲ စဉ်းစားစဉ်းစား ဘယ်လိုပဲ ကားပညာရှင်တွေနဲ့ တိုင်ပင်ကြည့်ကြည့် ဒီအဖြေပဲ ထွက်တယ်။ အစ်ကိုက တကယ်လုပ်ရက်တယ်နော်။ :P
မမ ၃ ရက်လောက်ပျောက်သွားတာ တစ်ခြား state ကို ကားသယ်တဲ့ ကားကြီးနဲ့ ပါသွားတာကိုး။ ကားနောက်ပြန်ဆုတ်ဖို့ အချိန်မရလိုက်တာမို့ လား။ ဟားဟား
ဖတ်လို့ ကောင်းလိုက်တာ နေကောင်းသွားပြီလား ညီမ အမတော့ ပြန်ပြန်ဖျားနေတယ်။
အစ်မရေ ကျနော်-နှင်းဆီရောင်တော်လှန်ရေးရုပ်ပုံလွှာအပိုင်း(၄)တင်ထားတယ်သတင်းပို့ တာပါ။စာတွေလည်းလာဖတ်သွားပါတယ်။
i love this post very much ..
i'd like to send you one photo ..
how can i reach you, to send it ?
hee,hee,I just recently had an accident.I was too sick and hard to concentrate in driving.I sent two kids in school and shot to my work and I need to pass the Curtin University area and there are alot of international student driver and most of them are not good driver and most of them having first car and dangerous spot.anyway it was at my fault as I hit the slow moving car from front and it hit another one from it's front(chain reaction).luckily,no one was injured and my insurance paid for all the damages and wrote off my car for $2000.pls make sure you have your insurance update.so.you can have confidence financially whilst driving .